ဆိုင်ကယ်ကျော်တက်စဉ်ဆဲဆိုစကားများခဲ့သည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ကျောင်းသားချင်းဓားထိုးမှုဖြစ်ပွားရာ တစ်ဦးသေဆုံး၊ တစ်ဦးဒဏ်ရာရ | Akonthi
မဟာအောင်မြေမြို့နယ်တွင် ဆိုင်ကယ်ကျော်တက်စဉ် ဆဲဆိုစကားများခဲ့သည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ကျောင်းသားချင်း ဓားထိုးမှုဖြစ်ပွားရာ ဆယ်တန်းကျောင်းသားတစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားတစ်ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်တွင် ထက်လွင်မိုးခန့်၊ သမိုင်းပထမနှစ်ကျောင်းသား သည် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ဇင်မင်းသူ၊ (၁၉)နှစ်၊ ပထဝီပထမနှစ်ကျောင်းသား၊ မြတ်ဘုန်းစံ၊ (၁၉)နှစ်၊ (၁၀)တန်း တို့နှင့်အတူ အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်၊ ည ၉ နာရီ ၄၅ မိနစ်ခန့်က ဆိုင်ကယ်တစ်ယောက်တစ်စီးဖြင့် ၆၉ လမ်းအတိုင်း မောင်းနှင်လာစဉ် ၆၉xသိပ္ပံလမ်းထောင့်ရှိ မီးပွိုင့်အရောက်တွင် ဆိုင်ကယ် ၃ စီးဖြင့် အမျိုးသား ၅ ဦးမှ ကျော်တက်သွားပြီး ထက်လွင်မိုးခန့်အား ဆဲဆိုသဖြင့် ၎င်းတို့မှ ပြန်လည်ဆဲဆိုပြီးနောက် ၆၉x သိပ္ပံလမ်းမှ သိပ္ပံလမ်းအတိုင်း မောင်းနှင်လာစဉ် ၇၃ လမ်းမီးပွိုင့်အနီးအရောက်၌ ဆဲဆိုသွားသည့် အဆိုပါအမျိုးသား ၅ ဦးက ထက်လွင်မိုးခန့်တို့ မောင်းနှင်လာသောဆိုင်ကယ်ကို ရပ်ခိုင်းခဲ့ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
ထို့နောက် ဆဲဆိုသွားသောအဖွဲ့မှ အမျိုးသား ၁ ဦးက အသင့်ပါလာသည့် ဓားဖြင့်ထိုးရာ မြတ်ဘုန်းစံ၌ ဝဲနံဘေးထိုးသွင်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး ကျန်အမျိုးသား ၁ ဦးမှ ဇင်မင်းသူအား ဓားဖြင့်ထိုးရာ ယာလက် ခလယ်၊လက်ညှိုး ပြတ်ရှ၊ ၀မ်းဗိုက်ဝဲဘက်ထိုးသွင်းဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့သဖြင့် မဟာအောင်မြေမြို့မရဲ စခန်းတွင် (ပ)၇၉၄/၂၀၁၈၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ- ၃၂၆/၁၁၄ အရ အမှုဖွင့်ခဲ့ပြီး ဒဏ်ရာရရှိသူ မြတ်ဘုန်းစံမှာ အောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်၊ နံနက် ၅ နာရီခွဲခန့်တွင် သေဆုံးသွားသည့်အတွက် ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ- ၃၀၂/၃၂၆/၁၁၄ ဖြင့် ပြောင်းလဲအမှုဖွင့်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကို ဖမ်းဆီးရမိရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့မှ အခင်းဖြစ်ရပ်အနီးရှိ စည်ပင် ရိပ်သာတွင် တပ်ဆင်ထားသော ၆၉ လမ်း၊ သိပ္ပံလမ်းဆုံရှိ CCTV မှတ်တမ်းအားကြည့်ရှုရာ ထိုသူများ စီးနင်းလာသည့်ဆိုင်ကယ်မှာ (၃)စီးမဟုတ်ဘဲ (၄)စီး၊ လူ(၄)ဦးဖြစ်သည်ဟု စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရ၍ ၄င်း ဆိုင်ကယ်(၄)စီးအနက်၊ ဆိုင်ကယ်(၁)စီးသာ နံပါတ်တပ်ဆင်ထားပြီး ဆိုင်ကယ်အမှတ်မှာ ၆၂ယ/…. ဟွန်ဒါကလစ် နက်/နီရောင်ဆိုင်ကယ်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
စစ်ဆေးတွေ့ရှိမှုအရ စုံစမ်းရှာဖွေခဲ့ရာ ပြည့်ဖြိုးအောင်၊ နောက်ဆုံးနှစ်(IR)ဆိုသူဖြစ်ကြောင်း သိရသဖြင့် ၄င်း၏နေအိမ်၌ အခင်းဖြစ်စဉ် စီးနင်းအသုံးပြုခဲ့သည့် နံပါတ်ပြားဖြုတ်ထားသော အတည်ပြုစုံစမ်း ရရှိ ထားသည့် ၆၂ယ/….ဆိုင်ကယ်နှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖမ်းဆီးရမိသည့် ပြည်ဖြိုးအောင်၏ ထွက်ဆိုချက်အရ ပြစ်မှုကျူးလွန်ရာတွင် ရဲထွန်းလင်း၊ နေဦးလှိုင် နှင့် ဘိုကီးဆိုသူတို့ ပါဝင်ပြီး ဘီယာဆိုင်များသို့ သွားလာလေ့ရှိကြောင်း သိရသဖြင့် ၄င်းတို့သွားလာ တက်သည့်နေရာများသို့ ဆက်လက်စုံစမ်းရာ မန္တလေးမြို့ ၆၇x၆၈၊ ၃၂x၃၃ လမ်းကြားရှိ စားသောက် ဆိုင်ရှေ့စားပွဲတွင် ရဲထွန်းလင်း၊ (၂၂)နှစ်၊ တတိယနှစ်(ဘူမိဗေဒ)၊ ၁၉ x ၂၀ လမ်းကြား၊ အကွက်(၄၇)၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်နေသူနှင့် နေဦးလှိုင်၊ (၂၂)နှစ်၊ နောက်ဆုံးနှစ်(သင်္ချာ)၊ မဲကင်းကုန်းရွာ၊ ပုသိမ် ကြီးမြို့နယ်နေသူတို့(၂)ဦးအား ဘီယာသောက်နေစဉ် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖမ်းဆီးရမိသည့် ရဲထွန်းလင်း၏ခန္ဓာကိုယ်အား ရှာဖွေရာ ၄င်းဝတ်ဆင်ထားသည့် ဂျင်းဘောင်းဘီယာ ဘက်အိပ်ကပ်အတွင်းမှ အခင်းဖြစ်အချိန်က အသုံးပြုခဲ့သော အရိုးအသွား (၉)လက်မကျော်ရှိ အသွား အလယ်တွင် လေကြောင်းပါပြီး မောင်းချဓါး(၁)ချောင်းနှင့် အခင်းဖြစ်စဉ် စီးနင်းခဲ့သည့် ၄၉ယ/….. နံပါတ်ပါ ကလစ်ဆိုင်ကယ်တို့အား သိမ်းဆည်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဘိုကီးအား ဖမ်းဆီးရမိရေးအတွက် ၄င်းသွားလာတတ်သည့်နေရာများသို့ ဆက်လက်စုံစမ်းရာ သော် ဇင်လတ်(ခ)ဘိုကီး၊ ၂၁ နှစ်၊ ပထမနှစ်(ပထ၀ီ)အား ၁၉ လမ်း၊ သံလမ်းဒေါင့်ရှိ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင် ၄င်းစီးနင်းခဲ့သည့် ၃၅ယ/…. ဆိုင်ကယ်နှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖမ်းဆီးရမိသည့် ရဲထွန်းလင်းပါ(၄)ဦး၏ ထွက်ဆိုချက်အရ ၆၉ လမ်း မီးပွိုင့်အနီးတွင် တရားလိုထက် လွင်မိုးနှင့်အဖွဲ့မှ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် အရှေ့မှ ပိတ်စီးသည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ရဲထွန်းလင်းနှင့်အဖွဲ့မှ ဆိုင် ကယ်ဖြင့် ဟွန်းတီးကာ လမ်းတောင်းရာမှ အပြန်အလှန်ဆဲဆိုခဲ့ကြောင်း ထက်လွင်မိုးအဖွဲ့မှ တစ်ဦးက “မိုက်ရင် တစ်ယောက်ချင်းထိုးမယ်” ဟု အော်ဟစ်ပြောဆို ကြိမ်းမောင်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းနောက် ၆၉ လမ်းမှ သိပ္ပံလမ်းအတိုင်း ၇၈ လမ်းဘက်သို့အသွား ၆၉ လမ်းနှင့် ၇၃ လမ်းကြား၊ MCC အနီးမျက်စောင်းထိုး မြောက်ဘက်ခြမ်း သိပ္ပံလမ်းပေါ်တွင် ရဲထွန်းလင်းနှင့်အဖွဲ့မှ ဆိုင်ကယ် ရပ်ကာ အပေါ့သွားစဉ် ထက်လွင်မိုးနှင့်အဖွဲ့ ရောက်ရှိလာပြီး “ တစ်ယောက်ချင်း ထိုးမလား” ဟု စိန်ခေါ်ရာမှ မကျေနပ်၍ ရဲထွန်းလင်းမှ အသင့်ယူဆောင်လာသော နှစ်ဖက်အသွားပါသည့် မောင်းချဓါးဖြင့် ပထမဆုံးတစ်ဦးအား တစ်ချက်ထိုးပြီး နောက်တစ်ဦးအား ဆက်လက်ထိုးခဲ့ကြောင်း နေဦးလှိုင်မှလည်း အသင့်ပါလာသော သုံးဆစ်ချိုးသံတုတ်ဖြင့် ရိုက်ခဲ့ပြီးနောက် သိပ္ပံလမ်းအတိုင်း ၇၈ လမ်းဘက်သို့ မောင်းပြေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဆိုငျကယျကြျောတကျစဉျဆဲဆိုစကားမြားခဲ့သညျ့ကိစ်စနှငျ့ပတျသကျ၍ ကြောငျးသားခငျြးဓားထိုးမှုဖွဈပှားရာ တဈဦးသဆေုံး၊ တဈဦးဒဏျရာရ
မဟာအောငျမွမွေို့နယျတှငျ ဆိုငျကယျကြျောတကျစဉျ ဆဲဆိုစကားမြားခဲ့သညျ့ကိစ်စနှငျ့ပတျသကျ၍ ကြောငျးသားခငျြး ဓားထိုးမှုဖွဈပှားရာ ဆယျတနျးကြောငျးသားတဈဦးသဆေုံးခဲ့ပွီး တက်ကသိုလျ ကြောငျးသားတဈဦး ဒဏျရာရရှိခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
ဖွဈစဉျမှာ မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီး၊ မဟာအောငျမွမွေို့နယျတှငျ ထကျလှငျမိုးခနျ့၊ သမိုငျးပထမနှဈကြောငျးသား သညျ သူငယျခငျြးဖွဈသူ ဇငျမငျးသူ၊ (၁၉)နှဈ၊ ပထဝီပထမနှဈကြောငျးသား၊ မွတျဘုနျးစံ၊ (၁၉)နှဈ၊ (၁၀)တနျး တို့နှငျ့အတူ အောကျတိုဘာလ ၁၅ ရကျ၊ ည ၉ နာရီ ၄၅ မိနဈခနျ့က ဆိုငျကယျတဈယောကျတဈစီးဖွငျ့ ၆၉ လမျးအတိုငျး မောငျးနှငျလာစဉျ ၆၉xသိပ်ပံလမျးထောငျ့ရှိ မီးပှိုငျ့အရောကျတှငျ ဆိုငျကယျ ၃ စီးဖွငျ့ အမြိုးသား ၅ ဦးမှ ကြျောတကျသှားပွီး ထကျလှငျမိုးခနျ့အား ဆဲဆိုသဖွငျ့ ၎င်းငျးတို့မှ ပွနျလညျဆဲဆိုပွီးနောကျ ၆၉x သိပ်ပံလမျးမှ သိပ်ပံလမျးအတိုငျး မောငျးနှငျလာစဉျ ၇၃ လမျးမီးပှိုငျ့အနီးအရောကျ၌ ဆဲဆိုသှားသညျ့ အဆိုပါအမြိုးသား ၅ ဦးက ထကျလှငျမိုးခနျ့တို့ မောငျးနှငျလာသောဆိုငျကယျကို ရပျခိုငျးခဲ့ကွောငျး ရဲတပျဖှဲ့၏ ထုတျပွနျခကျြအရ သိရသညျ။
ထို့နောကျ ဆဲဆိုသှားသောအဖှဲ့မှ အမြိုးသား ၁ ဦးက အသငျ့ပါလာသညျ့ ဓားဖွငျ့ထိုးရာ မွတျဘုနျးစံ၌ ဝဲနံဘေးထိုးသှငျးဒဏျရာရရှိခဲ့ပွီး ကနျြအမြိုးသား ၁ ဦးမှ ဇငျမငျးသူအား ဓားဖွငျ့ထိုးရာ ယာလကျ ခလယျ၊လကျညှိုး ပွတျရှ၊ ဝမျးဗိုကျဝဲဘကျထိုးသှငျးဒဏျရာမြား ရရှိခဲ့သဖွငျ့ မဟာအောငျမွမွေို့မရဲ စခနျးတှငျ (ပ)၇၉၄/၂၀၁၈၊ ရာဇသတျကွီးပုဒျမ- ၃၂၆/၁၁၄ အရ အမှုဖှငျ့ခဲ့ပွီး ဒဏျရာရရှိသူ မွတျဘုနျးစံမှာ အောကျတိုဘာလ ၁၆ ရကျ၊ နံနကျ ၅ နာရီခှဲခနျ့တှငျ သဆေုံးသှားသညျ့အတှကျ ရာဇသတျကွီး ပုဒျမ- ၃၀၂/၃၂၆/၁၁၄ ဖွငျ့ ပွောငျးလဲအမှုဖှငျ့ခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
ပွဈမှုကြူးလှနျသူမြားကို ဖမျးဆီးရမိရေးအတှကျ သကျဆိုငျရာရဲတပျဖှဲ့မှ အခငျးဖွဈရပျအနီးရှိ စညျပငျ ရိပျသာတှငျ တပျဆငျထားသော ၆၉ လမျး၊ သိပ်ပံလမျးဆုံရှိ CCTV မှတျတမျးအားကွညျ့ရှုရာ ထိုသူမြား စီးနငျးလာသညျ့ဆိုငျကယျမှာ (၃)စီးမဟုတျဘဲ (၄)စီး၊ လူ(၄)ဦးဖွဈသညျဟု စဈဆေးတှရှေိ့ခဲ့ရ၍ ၎င်းငျး ဆိုငျကယျ(၄)စီးအနကျ၊ ဆိုငျကယျ(၁)စီးသာ နံပါတျတပျဆငျထားပွီး ဆိုငျကယျအမှတျမှာ ၆၂ယ/…. ဟှနျဒါကလဈ နကျ/နီရောငျဆိုငျကယျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
စဈဆေးတှရှေိ့မှုအရ စုံစမျးရှာဖှခေဲ့ရာ ပွညျ့ဖွိုးအောငျ၊ နောကျဆုံးနှဈ(IR)ဆိုသူဖွဈကွောငျး သိရသဖွငျ့ ၎င်းငျး၏နအေိမျ၌ အခငျးဖွဈစဉျ စီးနငျးအသုံးပွုခဲ့သညျ့ နံပါတျပွားဖွုတျထားသော အတညျပွုစုံစမျး ရရှိ ထားသညျ့ ၆၂ယ/….ဆိုငျကယျနှငျ့အတူ ဖမျးဆီးရမိခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
ဖမျးဆီးရမိသညျ့ ပွညျဖွိုးအောငျ၏ ထှကျဆိုခကျြအရ ပွဈမှုကြူးလှနျရာတှငျ ရဲထှနျးလငျး၊ နဦေးလှိုငျ နှငျ့ ဘိုကီးဆိုသူတို့ ပါဝငျပွီး ဘီယာဆိုငျမြားသို့ သှားလာလရှေိ့ကွောငျး သိရသဖွငျ့ ၎င်းငျးတို့သှားလာ တကျသညျ့နရောမြားသို့ ဆကျလကျစုံစမျးရာ မန်တလေးမွို့ ၆၇x၆၈၊ ၃၂x၃၃ လမျးကွားရှိ စားသောကျ ဆိုငျရှစေ့ားပှဲတှငျ ရဲထှနျးလငျး၊ (၂၂)နှဈ၊ တတိယနှဈ(ဘူမိဗဒေ)၊ ၁၉ x ၂၀ လမျးကွား၊ အကှကျ(၄၇)၊ အောငျမွသောစံမွို့နယျနသေူနှငျ့ နဦေးလှိုငျ၊ (၂၂)နှဈ၊ နောကျဆုံးနှဈ(သင်ျခြာ)၊ မဲကငျးကုနျးရှာ၊ ပုသိမျ ကွီးမွို့နယျနသေူတို့(၂)ဦးအား ဘီယာသောကျနစေဉျ ဖမျးဆီးရမိခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
ဖမျးဆီးရမိသညျ့ ရဲထှနျးလငျး၏ခန်ဓာကိုယျအား ရှာဖှရော ၎င်းငျးဝတျဆငျထားသညျ့ ဂငျြးဘောငျးဘီယာ ဘကျအိပျကပျအတှငျးမှ အခငျးဖွဈအခြိနျက အသုံးပွုခဲ့သော အရိုးအသှား (၉)လကျမကြျောရှိ အသှား အလယျတှငျ လကွေောငျးပါပွီး မောငျးခဓြါး(၁)ခြောငျးနှငျ့ အခငျးဖွဈစဉျ စီးနငျးခဲ့သညျ့ ၄၉ယ/….. နံပါတျပါ ကလဈဆိုငျကယျတို့အား သိမျးဆညျးခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
ဘိုကီးအား ဖမျးဆီးရမိရေးအတှကျ ၎င်းငျးသှားလာတတျသညျ့နရောမြားသို့ ဆကျလကျစုံစမျးရာ သျော ဇငျလတျ(ခ)ဘိုကီး၊ ၂၁ နှဈ၊ ပထမနှဈ(ပထဝီ)အား ၁၉ လမျး၊ သံလမျးဒေါငျ့ရှိ လကျဖကျရညျဆိုငျတှငျ ၎င်းငျးစီးနငျးခဲ့သညျ့ ၃၅ယ/…. ဆိုငျကယျနှငျ့အတူ ဖမျးဆီးရမိခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
ဖမျးဆီးရမိသညျ့ ရဲထှနျးလငျးပါ(၄)ဦး၏ ထှကျဆိုခကျြအရ ၆၉ လမျး မီးပှိုငျ့အနီးတှငျ တရားလိုထကျ လှငျမိုးနှငျ့အဖှဲ့မှ ဆိုငျကယျဖွငျ့ အရှမှေ့ ပိတျစီးသညျ့ကိစ်စနှငျ့ပတျသကျ၍ ရဲထှနျးလငျးနှငျ့အဖှဲ့မှ ဆိုငျ ကယျဖွငျ့ ဟှနျးတီးကာ လမျးတောငျးရာမှ အပွနျအလှနျဆဲဆိုခဲ့ကွောငျး ထကျလှငျမိုးအဖှဲ့မှ တဈဦးက “မိုကျရငျ တဈယောကျခငျြးထိုးမယျ” ဟု အျောဟဈပွောဆို ကွိမျးမောငျးခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
ယငျးနောကျ ၆၉ လမျးမှ သိပ်ပံလမျးအတိုငျး ၇၈ လမျးဘကျသို့အသှား ၆၉ လမျးနှငျ့ ၇၃ လမျးကွား၊ MCC အနီးမကျြစောငျးထိုး မွောကျဘကျခွမျး သိပ်ပံလမျးပျေါတှငျ ရဲထှနျးလငျးနှငျ့အဖှဲ့မှ ဆိုငျကယျ ရပျကာ အပေါ့သှားစဉျ ထကျလှငျမိုးနှငျ့အဖှဲ့ ရောကျရှိလာပွီး “ တဈယောကျခငျြး ထိုးမလား” ဟု စိနျချေါရာမှ မကနြေပျ၍ ရဲထှနျးလငျးမှ အသငျ့ယူဆောငျလာသော နှဈဖကျအသှားပါသညျ့ မောငျးခဓြါးဖွငျ့ ပထမဆုံးတဈဦးအား တဈခကျြထိုးပွီး နောကျတဈဦးအား ဆကျလကျထိုးခဲ့ကွောငျး နဦေးလှိုငျမှလညျး အသငျ့ပါလာသော သုံးဆဈခြိုးသံတုတျဖွငျ့ ရိုကျခဲ့ပွီးနောကျ သိပ်ပံလမျးအတိုငျး ၇၈ လမျးဘကျသို့ မောငျးပွေးခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
ဓာတျပုံ- Mandalay Police